About Us - Charming metal ngamazwe Co., Ltd.
Stainless Bar / Intonga
Stainless Pipe / Tube
wire steel stainless
Charming Metal kakhulu kwiimveliso insimbi ukusuka ezilahliweyo steel stainless ukuba ugqibile iimveliso zorhwebo. Impumelelo yethu yakhelwe trust nokuthembeka ukuba sindise kubathengi bethu namaqabane. Abaseki zethu ngaphezu kweminyaka engama-20 yamava kwi yorhwebo steel stainless ngamazwe engama-20 yaye ukuba nempumelelo kwi Economics ezitshintsha ngokuthe zorhwebo ngentsimbi ye kwimeko entle.
Ukususela ekuqaleni kweminyaka yee-1990, Abaseki zethu yasekwa ngentengiso zibe iimveliso nasekukhangeleni kwimarike Chinese evela ematyeni intsimbi ngamazwe ezifana KTN, Acerinox, Tang Eng, Yieh Loong, ALZ, Ugine, Outokumpu, NA kunye Nippon Steel. Siyaqhubeka unikezele kubasebenzisi ezinkulu Chinese lamabakala insimbi 310, 309, 316L, 304, 201, 441 and 430, 409L ekuveliseni zokutya, izitya, izinto zasekhitshini, izahlulo auto, izixhobo mveliso, kunye nezinye iimveliso zigqityiwe.
ezithunyelwa kwamanye amazwe
Njengokuba umthamo eTshayina imveliso liye landa, isicwangciso inkampani yethu iye yalungiswa ukuquka ngokukhupha elizweni of steel stainless ukusuka eTshayina ukuya kwezinye iimarike. Sisebenza kunye kubavelisi China kuquka TISCO, Baosteel, Posco, kunye nezinye abenzi asahlumayo. Siye saseka amajelo uzinike kuMbindi Mpuma, eYurophu, Umzantsi Melika, kunye mpuma Asia.
Thina asebenza iziko yogcino indawo e Foshan, inkulu steel stainless iziko zorhwebo eTshayina. Apha ukuqhuba ngaphezulu kwendawo yemveliso ngelayini usebenzisa umatshini Italian. Ukusuka kule ndawo, nako Polish No 3 impandla scotch-brite, No 4 impandla kunye Akukho kugudiswa isipili 8 thina.
Joyina Newsletter yethu
I-avareji imveliso imihla ngentsimbi crude i ...
Uhlalutyo imfuno Market of s eTshayina ...